၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ဘလွန်းဒီအောဆု ကို မက်ဆီထက် စာရင် ဗန်ဒိုက်သာ ဆွတ်ခူးသင့်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကလော့ - SPORTS MYANMAR
၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ဘလွန်းဒီအောဆု ကို မက်ဆီထက် စာရင် ဗန်ဒိုက်သာ ဆွတ်ခူးသင့်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကလော့
လီဗာပူး မန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့ က ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ဘလွန်းဒီအော ဆုကို ဘာစီလိုနာ စူပါစတား လီယွန်နယ် မက်ဆီ ထက် စာရင် သူ့ရဲ့ နောက်ခံလူ ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက် ကသာ ဆွတ်ခူး သင့်တယ်လို့ ယုံကြည် နေပါတယ်။ ဘလွန်းဒီအော ဆု အတွက် အယေက် ၃၀ ဆန်ကာတင် စာရင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလက ထုတ်ပြန် ကြေငြာ ခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာ ရဲ့ မက်ဆီ ၊ လီဗာပူး ရဲ့ ဗန်ဒိုက် နဲ့ မာနေး တို့ဟာ ဒီဆု ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ အတွက် ရေပန်း အစားဆုံး သူတွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဆိုရင်လည်း ကလပ် စံချိန်တင် ရမှတ် ၉၇ မှတ်ထိ ရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မိုဟာမက် ဆာလား ၊ အလီဆွန် ၊ ဂျီနီဝိုင်နယ်ဒန် ၊ အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး နဲ့ ရော်ဘတ်တိုဖာမီနို တို့ကလည်း ဘလွန်းဒီအော ဆု အတွက် အယောက် ၃၀ ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ပါ၀င် ခဲ့ကြ ပေမယ့်လည်း လီဗာပူး မန်နေဂျာ ကတော့ ဒီဆု နဲ့ ဗန်ဒိုက် ကသာ အထိုက်တန်ဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက် ပါတယ်။
ကလော့ က “ခင်ဗျား အနေနဲ့ ဒီ generation ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားကို ဘလွန်းဒီအော ပေးသွားမယ် ဆိုရင် ဒီဆု ကို အမြဲတမ်း လီယွန်နယ် မက်ဆီ ကိုပဲ ပေးသွား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ အတွက် အကောင်းဆုံး ကစားသမား ကို ဘလွန်းဒီအောဆု ပေးသွား ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက် အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆု ကို ဘယ်လိုမျိုး ပုံစံနဲ့ ပေးအပ် သလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အတိအကျ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကျွန်တော် နားလည်တဲ့ ဆုပေးရတဲ့ ပုံစံ ပါပဲ။ အားလုံးရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားလား? ဒါဟာ လီယွန်နယ် ပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားလား ? ဒါဟာ ဗာဂျယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လာ မလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့် သွားရမှာပါ။” လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်း အနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၃ အပြီးမှာ လက်ရှိ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ မန်စီးတီး အသင်းကို ၉ မှတ် ဖြတ်ထား နိုင်ဆဲ ဖြစ်ပြီး လီဗာပူး အနေနဲ့ ဒီဖလား ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ ယုံကြည်မှု ပိုမို မြင့်တက်လာပြီလား? ဆိုပြီး ကလော့ ကို မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး မန်နေဂျာ ကတော့ အဆင့်လေး နေရာက ချဲလ်ဆီး နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ လက်စတာ တို့ကလည်း အမှတ်ပေးဖလား ကို အမှန်တကယ် စိန်ခေါ် နေသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။
ကလော့ က “ကျွန်တော်တို့ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး တကယ် စိတ်မပူ ပါဘူး။ လက်စတာ ကို ၈ မှတ်ပဲ အသာ ရထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ သူတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ် ၄ နှစ် လောက်က ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသင်းပါ။ ချဲလ်ဆီး ကလည်း ဒီရာသီ မယုံနိုင် လောက်အောင် အကောင်းဆုံး ကစား နေပါတယ်။
အကယ်လို့များ ကျွန်တော်တို့ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် မှာသာ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့မယ် ဆိုရင် ရုတ်တရက် ဆိုသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုက ငါးမှတ်သာ ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီကျရင် လူတွေက တစ်မျိုး ပြောဆို ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အရာ ကတော့ အမှတ်ပေးဖလား နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ စိတ်အေးအေး ထားထား ဖို့ပါ။ ကျွန်တေ်ာတို့ ရမှတ်တွေ အကြောင်း မစဉ်းစား သလို ၊ ရမှတ် ကွာဟမှု အကြောင်းလည်း မစဉ်းစား ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လာမည့် ပွဲစဉ် အကြောင်းသာ တွေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအတိုင်း ဆက်သွား နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။